Home Wararka Dhaawacyadii Muqdisho la keenay oo ay Villa Somalia diiday in la soo...
Dhaawacyadii Muqdisho la keenay oo ay Villa Somalia diiday in la soo bixiyo (Sababta)
Qaar ka mid ah dhaawacyadii laga keenay KAXANDHAALE ayaa loo diiday in gawaarida gargaarka degdega ah ee AMBULANCE-ka ay gudaha garoonka Aadan Cadde ka soo qaadaan dhaawacyada.
AMBULANCE-yada oo dhowr ahaa ayaanna amar lagu siiyay inaynan gudaha GAROONKA u soo gali karin ayna tahay amar ka yimid Gen. Cabdiashkir oo ay xigto yihiin MW. Farmaajo.
Ugu danbeyn DHAAWACYADII dadka qabay ayeey dantu ku qasabtay inay gawaaridda gurmadka ah ay iyaga banaanka hore ee GAROONKA ugu yimaadaan waa kuwii sahlanaayeenee, halka kuwii darnaanna lagu soo qaaday kuraasta cuuryaamada si ay ugu garaan gawaaridda gurmadka oo banaanka u taagnaa taasoo loo arkay wax bini’aadanimada ka fog.
Dhinaca kale Dhawacyadii ku heebta Ahaa Madaxweyne Farmaajo ayaa Shalay Galab laga soo dajiyay Airportka Moqdisho waxana loo ogoladay in Ambalas yada gudaha u galaan Airportka Moqdisho waxana Halka kusoo dhaweeyay Xildhibaano ku heeb ah waxana ugu Cad cada Xildhibanada Cabdi Shire Ciyaar jecel iyo Xildhibaankii hubka u diray gobolada dhexe Xil. Cabdishakur Cali Mire
Xildhiban Cabdi Shire Ciyaar jecel ayaa Amar ku bixiyay In Diyaradaha kasoo duulo Galkacyo ee Dhwacyada wado in aan loo ogolaan in Ambalas yada gudaha eesan kasoo qaadi Karin
Waa Nasiib daro in la kala Saaro Dad Soomaileed oo intii hub la isugu dhiibay misna heyb sooc loogu daray dhaawacooda.